Sineminyaka emithathu ukugwema inhlekelele yesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sisalelwe yiminyaka emithathu ukugwema inhlekelele yesimo sezulu
Eminyakeni yamuva nje, amarekhodi okufudumala aphulwe cishe njalo ngenyanga, okuthe, engezwa ezimeni eziya ngokuya zesimo sezulu, kuholela esintwini ukuthi sibuze, cishe impela, wenzani ngeplanethi.
Zonke izenzo zinokuphendula kwazo. Kwakulindelekile ukuthi, kungekudala, ekhaya lethu, uMhlaba, izinto zizoqala ukwenzeka esasingakwazi ukuzilawula. Iqembu elilodwa libhale incwadi evulekile lichaza lokho sineminyaka emithathu kuphela ukugwema imiphumela emibi kakhulu yesimo sezulu.
Incwadi, ebhalwe ngososayensi abanohlonze abayisithupha kanye nezikhulu, okubalwa umcwaningi nowayengumphathi wezemvelo we-UN, uChristiana Figueres, kanye nesazi se-physics uStefan Rahmstorf, siyachaza iminyaka emithathu edlule ibe ngeyeshisa kakhulu emlandweni emhlabeni jikelele. Ukwanda kwe-1ºC nje sekuvele kubeka engcupheni yezigidi zabantu: iqhwa emapalini seliqale ukuncibilika ngezinga elibukeka sengathi alinakunqandeka, ulwandle lukhuphuka ngokushesha kunalokho obekulindelekile, kanye isomisokanye neziphepho kuyanda.
Okwamanje, senzani? Sigawula isilinganiso semithi eyizigidi eziyi-15,3 unyaka nonyaka (futhi kukhona cishe izigidigidi ezintathu) ukushiya umhlaba ongenalutho ongakha kuwo, futhi singcolisa izilwandle nemifula, kanye nomoya esiwuphefumulayo. Uma lokhu kuqhubeka, ikusasa elisilindeleyo ngeke libe yinto ethembisayo, ngakho-ke abacwaningi babeke uchungechunge lwezinhloso okufanele sizifeze ngo-2020, njengokukhulisa amandla avuselelekayo abe ngu-30% wokusetshenziswa kukagesi, ukuqinisekisa ukuthi U-15% wezimoto ezintsha ungokagesi, futhi kunciphisa ukukhishwa okuphelele okuvela ekuqothulweni kwamahlathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Sisalelwe yiminyaka emithathu ukugwema inhlekelele yesimo sezulu